– सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई लोकतन्त्रको उपहास भनेर टिप्पणी गरेका छन् । माओवादी केन्द्र त्यागेर एमाले (ओली समूह)बाट मन्त्री बनेका साहसहितका नेतालाई माओवादी केन्द्रले सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि उनको सो भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।
– नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले कास्कीमा समान्तर कमिटी गठन गरी शपथ गराएको छ । चैत १९ गते माधवकुमार नेपाल र गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज सुरेन्द्र पाण्डेले धनराज आचार्यको संयोजकत्वमा ७५ सदस्यीय जिल्ला कमिटी घोषणा गरेका थिए ।
– आगलागी नियन्त्रणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाली सेनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मंगलबार बालुवाटारमा रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसेको थियो ।
– सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा संविधानसम्मत नियुक्ति गरेको दाबी गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयोग (ओएचसीएचआर) लाई जवाफ पठाएको छ । आयोगमा संवैधानिक परिषद्को मापदण्ड मिचेर र संसद्लाई छलेर सरकारले एकलौटी ढंगबाट पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै ओएचसीएचआरले केहीअघि पत्र पठाएको थियो ।
– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीनदिने रुकुम–रोल्पा भ्रमणमा निस्किएका छन् । २६ चैतसम्म प्रचण्ड उतै रहने भएकाले त्यसअघि राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै ठोस निर्णय हुने सम्भावना न्यून छ । अझ बितेको हप्ताका राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने प्रचण्ड काठमाडौं फर्किएपछि पनि तत्कालै कुनै राजनीतिक उतारचढावको सम्भावना देखिंदैन ।
– गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कोभिड–१९ प्रभावित राहत तथा उद्धार परियोजनालाई उपलब्ध गराइएको आर्थिक सहयोग अपचलन भएको भन्दै उजुरी परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को जेनेभास्थित मुख्यालयले छानबिन सुरु गरेको छ ।
– स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयश त्रिपाठीले नेपालको निजामती कर्मचारी प्रशासन दोषपूर्ण रहेको बताएका छन् । पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री समेत रहेका मन्त्री त्रिपाठीले प्रशाासन समूहका निजामती कर्मचारी आवश्यकता भन्दा ७० प्रतिशत बढी रहेको दाबी गरे ।
– नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओलीलाई वैधानिकता दिएपनि नआत्तिन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन । मंगलबार आफ्नो समूह निकट वाग्मती प्रदेश कमिटीको वैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले आयोगले केपी ओलीको निर्णयलाई वैधानिकता दिए नआत्तिन आग्रह गरेका हुन् ।
– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले नागरिकले नेता सच्चाउने बेला आएको बताउनुभएको छ । नेताले गल्ती गरेमा नागरिकले खबरदारी गर्ने र गलत कामको भण्डाफोर गर्ने अधिकार पाएको भन्दै उहाँले आफूले गल्ती गरेमा नागरिकको बीचमा माफी माग्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस सरकारमा जान तयार रहेको बताएका छन्। झापा बुद्धशान्ति ७ का सहिद यामबहादुर आर्चायको सालिक अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले धोका नहुने किसिमको निर्णय आयो भने कांग्रेस सरकारमा जाने बताएका छन् ।
– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएकी छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या निरुपणका लागि वैज्ञानिक ढंगले योजनाबद्ध रुपमा काम अघि बढाएको बताइन् ।
– नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन इतिहासमै पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत् हुँदै छ । केन्द्र, प्रदेश र शाखाको नयाँ कार्यसमितिका लागि बुधबार निर्वाचन हुन लागेको हो । निर्वाचनका लागि बिहान विहान नौ बजेदेखि अपराह्न चार बजेसम्मको समय तोकिएको छ । देशभरबाट १३ हजार १ सय ८० पत्रकारहरुले तीन वर्षे कार्यकालका लागि आफ्नो नेता चुन्ने छन् ।
– नइ प्रकाशनले रजत महोत्सवका अवसरमा प्रा. डा. वासुदेव त्रिपाठीलाई महासमालोचकको उपाधिसहित पाँचलाख रुपियाँ राशिको ‘नइ रजत महोत्सव पुरस्कार’ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार नइ प्रकाशनका सदस्य सचिव नरेन्द्रराज प्रसाईले विज्ञप्ति जारी गरेर प्रा. डा. त्रिपाठीलाई महासमालोचकको सम्मानसहित पाँचलाख रुपियाँ राशिको ‘नइ रजत महोत्सव पुरस्कार’ले सम्मान गर्ने निणर्य गरेको हो ।